प्रहरी आइजीपी खनालको निर्देशन धज्जी उडाउदै कलकीका ट्राफिकको दादागिरी, पैदलयात्रुलाई थप्पड हान्दै चौकीमा थुन्ने समेतको धम्की
- नेपाली सन्देश सोमवार, बैशाख ३, २०७५ , 5.2K जनाले हेर्नुभयो
काठमाडौ २ बैशाख । ट्राफिक प्रहरीले पैदलयात्रुलाई धोक्राउदै थुनामा राख्ने धम्की दिएका छन । आइतबार विहान ११ बजेर ४५ मिनेट जादा कलकी स्थित मकालु पेट्रोल पम्म नजिकै डयुटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी इश्वर बहादुर शाहले एक पैदलयात्रुलाई स्पोर्टमा नै तिन थप्पड लगाउन खोजे अनि कठालोमा समातेर गलहत्याएका हुन ।
किन गरे यस्तो व्यवहार ?
सितापाइलातिरबाट आएको ना ४ ख ८६१९ नम्बरको ट्रक कलकी चोकको टा«फिक लाइटमा रोकिएको थियो । सोही दिशाबाट आएको बा २ च १८४८ नम्बरको निशान गाडी स्पिडमा आएर ट्रकमा घिस्रदै अगाडि बढयो । त्यही बेला ती प्रदलयात्रु बाटो क्रश गर्दै थिए । निशान गाडीले ती यात्रुलाई हानौला जस्तै गरी आएको भएपनि यात्रु सुरक्षित थिए । ट्रासफक लाइटमा रोकेर राखेको ट्रकमा धसारिएको निशान गाडी ड्राइभरले उल्टै ट्रकका चालकलाई हप्काउन थाले ‘लुकिङ ग्लास हेर्नुपर्दैन ?’ गल्ति भने निशान गाडिकै थियो ।
त्यही बेला डयुटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी इश्वरबहादुर शाह त्यहा आइपुगे ति पैदलयात्रुले निशान गाडी छ भनेर भनेका मात्र के थिए । ति ट्राफिकले सिधै गर्धनमा समातेर तीन पटकसम्म हिर्काउन खोजे तर हिकाउन भने सकेनन । मुखमा जे आयो त्यही त्यही बोल्न भ्याए । उनले पैदलयात्रुलाई त जान्ने हुन्छस, म भन्दा जान्ने त भइस, त यो सडकको रैथनीया राजा होस । तलाई चौकीमा लगेर थुनौ ? भन्दै मुखमा जे जे आयो त्यही त्यही शब्द उचारण कतिपय शब्दहरु अश्लिल तथा अपशब्द समेत प्रयोग गर्न गरे । ति पैदलयात्रु विचर विच सडकमा आफनो मान मर्यादामाथि अघात पुगीरहदा केही बोलेनन ।
रमितेको भीड सडकको छेउमा थियो । तलाई चौकीमा थुन्छु भन्दै कठालामा समातेर ति पैदलयात्रुलाई ट्राफिकले हुत्याए । मापसे गरेको आरोप लगाइ थुनामा राख्ने योजना सहित प्रहरीलाई फोन समेत गरे । २ मिनेटभित्रै एउटा मोटरसाइकलमा दुइ जना प्रहरी आए । ती युवा मासपे पनि गरेका थिएनन । एउटा सर्वसाधरण व्यक्तिले देखेको कुरा भन्दाखेरी ट्राफिकले यस्तो व्यवहार गर्नु न्यायोचित नभएपछि ती प्रहरीले ती पैदलयात्रुलाई आफनो बाटो जान आग्रह गरे ।
यता ट्राफिकले गल्ति गर्ने निशान गाडीलाई भने छाडेर ट्रकलाई भने दिनभर चौकीमा राखे । करिब ४ घण्टापछि आफनो ट्रक छाडेको ट्रकका चालन योगेश मगरले अखबार अनलाइनलाई बताए । ट्राफिक प्रहरीको काम सवारी आवतजावतलाई सहज बनाउने हो तर यात्रुलाई गालि बेइज्जत गरी यात्रुको मान मर्यादामाथि आच पुराउदा ती ट्राफिकलाई कारबाही हुने कि नहुने यही विषयमा इनिस्पेक्टर विमल थापालाई हामीले कल गर्न लगायौ तर विमल थापाले ती ट्राफिक प्रहरी इश्वरबहादुर शाहलाई सोधर कलब्याक गर्छु भने तर उनले कल गरेनन ।
सडकमा कुनै दुर्घटना हुदा प्रत्यक्षदर्शीलाई आधारमान्नु पर्ने एउटा नियम पनि हो तर यहाँ प्रत्यक्षदर्शीलाई ट्राफिकले उल्टै धम्काएर थुन्ने प्रयास गरिरहदा प्रहरीमा सुसाशनको पाठ सिकाएका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रहरी सुशासन बालुवमा पानी हाले जस्तै भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक बनेपछि सर्बेन्द्र खनालले कुनै लोभ, लालचमा नपरी काम गर्न प्रहरी अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
महानिरीक्षकमा बढुवा भएको ५ दिनपछि उपत्यकाभरिका प्रहरी इकाइमा कार्यरत् कर्मचारीलाई ब्रिफिङ गर्दै खनालले इमान्दारितापूर्वक जनताको सेवामा खटिन निर्देशन दिनुका साथै उनले लोभ, लालचमा पर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने समेत बताएका भए पनि महानिरिक्षको निर्देशनलाई यी ट्राफिकले धज्जी उडाइदिएका छन । लोभ र लालचमा लागेर निर्दोश ट्रक चालकलाई ४ घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिएभने पैदलयात्रुको समेत अपमान गरेका छन ।